स्वराज-प्रचण्ड भेट: स्वराजको जिज्ञासा, ‘अब नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्ला ? – Etajakhabar
स्वराज-प्रचण्ड भेट: स्वराजको जिज्ञासा, ‘अब नेपालको राजनीति कसरी अघि बढ्ला ?
काठमाडौं – विदेशमन्त्री स्वराजले शुक्रबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोल्टी होटेलमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । प्रचण्ड–स्वराजबीच पौने घन्टा ‘वन अन वन’ वार्ता भएको थियो । भेटमा स्वराजले अब नेपालको प्रक्रिया कसरी अघि जाला भनेर जिज्ञासा राखेको प्रचण्डले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । निर्वाचनपछिको परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनबारे सकारात्मक र रचनात्मक कुराकानी भएको प्रचण्डले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । ‘चुनावपछिको परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनबारे सकारात्मक र रचनात्मक कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले अब देश कसरी जाला भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो र हामी (वाम गठबन्धन) लाई बधाई र शुभकामना दिनुभयो ।’
स्वराजको नेपाल आगमनलाई आफूले सद्भाव भ्रमणका रूपमा बुझेको प्रचण्डको भनाइ छ । उनले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास आवश्यक रहेको र आफूहरू छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जाने पक्षमा रहेको जानकारी गराएको बताए । ‘मैले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास आवश्यक रहेको र हामी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जाने पक्षमा रहेको उहाँलाई जानकारी गराएँ,’ प्रचण्डले भने, ‘उहाँले पनि वाम गठबन्धन सरकारले नेपालको स्थायित्व र विकासमा चाल्ने कदमप्रति भारतको पूरै सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रचण्डसँगको भेटमा स्वराजले मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा माओवादीले पाएको परिणामका लागि बधाई दिएको उल्लेख गरेको छ ।
स्वराज–प्रधानमन्त्री आधा घन्टा ‘वन अन वन’ वार्ता स्वराजसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो । नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय विषयलाई थप मजबुत बनाउन हाम्रो छलफल केन्द्रित थियो ।’
राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेपछि विदेशमन्त्री स्वराज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न सीधै बालुवाटार पुगेकी थिइन् । पौने १ बजे बालुवाटार पुगेकी उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएको उनका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी प्रगाढ बनाउने र सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा भेटवार्ता केन्द्रित भयो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय विषयलाई थप मजबुत बनाउन छलफल केन्द्रित भएको बताएका छन् । देउवाले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई स्वागत गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो । नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय विषयलाई थप मजबुत बनाउन हाम्रो छलफल केन्द्रित थियो ।’
विदेशमन्त्री स्वराजले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन भारत सदैव तयार रहेको र आगामी दिनमा पनि रहिरहने बताएको डा. भट्टराईले जानकारी दिए । औपचारिक भ्रमण नभएकाले दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदानको विषयमा कुराकानी नभएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवा र विदेशमन्त्री स्वराजबीच करिब आधा घन्टा ‘वन अन वन’ वार्ता भएको थियो ।
२३ घन्टे नेपाल बसाइमा सात भेटवार्ता २३ घन्टे नेपाल बसाइका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले ‘वान अन वान’ र सामूहिक गरी सातवटा भेटवार्ता गरेकी छिन् । बिहीबार साढे ३ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएपछि सीधै सोल्टी होटेलमा पुगेकी स्वराजले सबैभन्दा पहिला पौने घन्टा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘वन अन वन’ वार्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले एमाले नेताहरूसँग सामूहिक वार्ता गरिन् । लगत्तै उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सम्मानमा दिएको रात्रिभोजमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । शुक्रबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम अध्यक्ष यादवलाई सोल्टीमै भेटिन् । मध्याहन् राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगिन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २०, २०७४ समय: ७:५४:२३